Unofa Kombat 11: mikana yekutamba paGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Unofa Kombat 11: mikana yekutamba paGNU / Linux
Inofa Kombat ndeimwe yemitambo yemavhidhiyo inozivikanwa kwazvo munhoroondo. Akave nezvaakakanganisa zvekuti aizoitawo kuti asvetukire kumubhaisikopo, pamwe nemitambo yake yemufirimu. Muchokwadi, gore rino vhezheni itsva yemufirimu yakaburitswa, sezvaunotoziva. Uye zvakare, iwo mutambo wevhidhiyo wakavewo uine akati wandei editions.
Unofa Kombat 11, uye Inofa Kombat 11 Yekupedzisira ndiyo yazvino vhezheni yenyaya iyi yekurwa. Pamusoro pezvo, idzi shanduro dzichangoburwa dzakasanganisira chimwe chinhu chinokatyamadza, uye izvo ndezvekuti kwete chete iwe unogona chete kuwana mavara eMK zvakasikwa pachezvazvo, kune zvekare mavara kubva kune mamwe mafirimu, sevashanyi vatambi, izvo zvinopa icho chakanyanya kukura uye kurwara kwakakosha, uchiona mavara akasiyana kwazvo achirwisana.
Semuenzaniso, iwe unogona kuwana, mukuwedzera kune zvakajairika Mortal Kombat, mavara vakadai saAlien, Terminator T-800, Kratos, Freddy Krueger, Robocop, Spawn, Rambo, Joker, Jason Voorhees, kana Leatherface. Nepo masimba acho akafanana neayo evamwe varwi mitambo yemavhidhiyo, senge Dragon Ball, Street Fighter, nezvimwe.
Zvese zvishamiso ... dambudziko? Zvakanaka, dambudziko nderekuti haisi kuwanikwa natively yeLinux, saka haugone kuitenga kune yako distro. Che Xbox chete, PlayStation, uye Microsoft Windows. Nekudaro, izvo hazvireve kuti hauna sarudzo, iwe unodaro.
Kuti uwane tamba Unofa Kombat 11 iyo nzira iri nyore Pasina kudiwa kwemuchina chaiwo kana kushandisa WINE, unogona kusarudza sarudzo mbiri dzinoenda mushe uye dzichakuchengetera kusagadzikana nematambudziko:
Google Stadia: Google vhidhiyo yemitambo yekushambadzira sevhisi inayo inowanikwa mune yayo katarogu, uye iwe unogona kutamba kubva kuPC yako neLinux kana zvimwe zvishandiso.
chiutsi: Ichokwadi kuti pane iyo inowanikwa yeWindows, asi nekuda kweValve mutengi iwe unozogona kushandisa inoshamisa Proton kuita iyo yechinyakare vhezheni ishande pane yako distro pasina kunetseka, kusanzwisisika kumisikidzwa, kana chero chinhu. Zvakareruka sekutenga kubva kuchitoro, kurodha pasi nekutamba kana uine Proton inoshanda. Uye zvakare, iri mu Chinzvimbo chegoridhe, zvinoreva kuti inoshanda chaizvo ...
Saka ikozvino zvaburitswa Anofa Kombat bhaisikopo mu cinema, kana iwe uchinzwa sekutamba mimwe mitambo, unogona kuzviita nenzira idzi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Unofa Kombat 11: mikana yekutamba paGNU / Linux
Wi-Fi "FragAttacks" kushaya simba kunokanganisa mamirioni emidziyo
Armbian 21.05 inosvika neLinux 5.11, DDE, rutsigiro rwemamwe mabhodhi uye nezvimwe